लोकमान प्रकरणको केहि तथ्यहरु यस्ता छन्
कार्तिक ४ काठमाडौ, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको लोकमान प्रकरणको बारेमा केहि तथ्यहरु यस्ता छन् ।
लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा रहेका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई २०७० बैशाख २४ को मध्यरातमा कसले धम्क्यायो ? र उनले एकाविहानै लोकमानको सपथ गराउन बाध्य भए ?
त्योबेला खिलराज रेग्मी सरकारका केही मन्त्रीले लोकमानलाई नियुक्त नगरौं भन्दा हिन्दीभाषी केही केही व्यक्तिहरुले कसरी धम्क्याएका थिए ? कालान्तरमा ती खुल्दै जालान् । लोकमानको नियुक्तिले अनर्थ हुन्छ, रोक्न सघाउनुस् भन्दै शीर्ष नेताहरुको दैलो चाहार्दा तत्कालीन एकाध मन्त्री निराशा बोकेर सिंहदरवार फर्किएको भुल्न सकिन्न ।तत्कालीन संवैधानिक परिषदका एकजना सदस्यले ‘श्रीमान ! लोकमानको बारेमा समाज विभाजित छ, उहाँ काबिल मान्छे भए पनि अहिले उहाँलाई नियुक्त गर्ने उपयुक्त बेला होइन’ भन्दा खिलराज रेग्मी कसरी जंगिएका थिए ? माधव घिमिरे बाहेक त्यो बैठकका सबै सदस्य जीवित छन्, उनीहरुले अवश्य बिर्सिएका छैनन् । रेग्मीले दिएको जवाफ अझै ताजा छ ।
सुनिए अनुसार लोकमानको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट विदेश पठाइँदैछ । उनले केही समयअघि एक जमघटमा भनेका थिए- म कार्यकालको अन्तिममा सबैलाई ठेगान लाएर गुरुसँग गएर बस्छु । मलाई थाहा छ, यहाँ बस्न दिँदैनन् ।
नेपाल वायु सेवा निगम,पर्यटक बोक्ने दोस्रो स्थानमा